Meet Joe Black (1998) | MM Movie Store
ဒီကားလေးကတော့ ၁၉၉၈ခုနှဈထှကျ Drama, Fantasy, Romance ကားလေးတဈကားဖွဈပါတယျ။မငျးသားကွီး BradPitt ရဲ့ငယျစဉျတုနျးကကားကောငျးလေးပါ။IMDb rating 7.1 ထိရထားတဲ့ကားလေးလဲဖွဈပါတယျ။
ဒီဇာတျကားလေးမှာ BradPitt ဟာ သမေငျးတမနျတဈဦးဖွဈပွီး အသကျ၇၀ပွညျ့မှေးနပှေဲ့ကိုသှားရောကျနတေဲ့စီးပှားရေးသမား တဈဦးကို သှားရောကျချေါဖို့ပါပဲ။အဲဒီအဘိုးကွီးတဈယောကျ မှေးနနေီ့းမှ နားထဲမှာထူးဆနျးတဲ့အသံတှဆေကျတိုကျကွားနပေမေယျ့ လဈြလြူရှုပွီးလုပျစရာတှဆေကျလုပျနခေဲ့တာပါ။
ဒါပမေယျ့ သမေငျးတမနျကတော့ အိမျထိပေါကျခလြာတော့တာပဲ။BradPitt တဈယောကျမကွာသေးခငျကမှ ပူပူနှေးနှေးသထေားတဲ့ လူငယျတဈယောကျရဲ့ကိုယျထဲကိုဝငျပူးပွီးအိမျထိ ဆိုကျဆိုကျမွိုကျမွိုကျရောကျခလြာတာပါ။
သို့သျော စူးစူးစမျးစမျးလုပျခဲ့တဲ့ သမေငျးတမနျဖွဈလတောကွောငျ့ စီးပှားရေးသမားအဘိုးကွီးနဲ့ အပေးအယူလုပျကွတော့တာပါပဲ။အဲဒါကတော့ BradPitt စိတျရှိသရှေ့ လူ့လောကကို သခြောလလေ့ာကငျြလညျနသေမြှကာလပတျလုံးအဲဒီအဘိုးကွီးက Guide အနနေဲ့လုပျပေးရမှာဖွဈပွီး သူပွနျမသှားသရှေ့ အဘိုးကွီးလညျးသမှောမဟုတျပါဘူး။
ဒီတော့ ကိုယျ့ကိုကိုယျ Joe Black လို့နာမညျပေးထားတဲ့ သမေငျးတမနျတဈယောကျနဲ့စီးပှားရေးသမားအဘိုးကွီးတို့ ဘယျလိုကမောကျကတှဖွေဈမလဲ။လူ့လောကကိုထဲထဲဝငျဝငျ ကငျြလညျလိုကျရတဲ့အခါ သမေငျးတမနျကွီးဘယျလို တှခှေကကြလြုပျမလဲဆိုတာတှကေိုဟာသနှောပွီး ကွညျ့ရှုရမှာဖွဈပါတယျ။
အဲဒီနောကျ သမေငျးတမနျကွီးရော လူ့လောကကနပွေနျထှကျသှားနိုငျပါ့မလား။ဘယျလိုနောကျဆံတငျးစရာတှေ ဘယျလိုသံယောဇဉျကွိုးလေးတှကေနျြခဲ့မှာလဲ။အဘိုးကွီးလညျး ဘယျလိုတှေ တိုငျပတျမလဲ…. မသခေငျြလို့ချေါထားကာမှဘယျလိုသခေငျြစိတျပေါကျအောငျ ကိုယျ့ရှုးကိုယျပတျမလဲဆိုတာတော့ ဆကျလကျ ကွညျ့ရှု့ လိုကျပါအုံးဗြာ
ဒီကားလေးကတော့ ၁၉၉၈ခုနှစ်ထွက် Drama, Fantasy, Romance ကားလေးတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။မင်းသားကြီး BradPitt ရဲ့ငယ်စဉ်တုန်းကကားကောင်းလေးပါ။IMDb rating 7.1 ထိရထားတဲ့ကားလေးလဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားလေးမှာ BradPitt ဟာ သေမင်းတမန်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး အသက်၇၀ပြည့်မွေးနေ့ပွဲကိုသွားရောက်နေတဲ့စီးပွားရေးသမား တစ်ဦးကို သွားရောက်ခေါ်ဖို့ပါပဲ။အဲဒီအဘိုးကြီးတစ်ယောက် မွေးနေ့နီးမှ နားထဲမှာထူးဆန်းတဲ့အသံတွေဆက်တိုက်ကြားနေပေမယ့် လျစ်လျူရှုပြီးလုပ်စရာတွေဆက်လုပ်နေခဲ့တာပါ။
ဒါပေမယ့် သေမင်းတမန်ကတော့ အိမ်ထိပေါက်ချလာတော့တာပဲ။BradPitt တစ်ယောက်မကြာသေးခင်ကမှ ပူပူနွေးနွေးသေထားတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ကိုယ်ထဲကိုဝင်ပူးပြီးအိမ်ထိ ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်ရောက်ချလာတာပါ။
သို့သော် စူးစူးစမ်းစမ်းလုပ်ခဲ့တဲ့ သေမင်းတမန်ဖြစ်လေတာကြောင့် စီးပွားရေးသမားအဘိုးကြီးနဲ့ အပေးအယူလုပ်ကြတော့တာပါပဲ။အဲဒါကတော့ BradPitt စိတ်ရှိသရွေ့ လူ့လောကကို သေချာလေ့လာကျင်လည်နေသမျှကာလပတ်လုံးအဲဒီအဘိုးကြီးက Guide အနေနဲ့လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပြီး သူပြန်မသွားသရွေ့ အဘိုးကြီးလည်းသေမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ဒီတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် Joe Black လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ သေမင်းတမန်တစ်ယောက်နဲ့စီးပွားရေးသမားအဘိုးကြီးတို့ ဘယ်လိုကမောက်ကတွေဖြစ်မလဲ။လူ့လောကကိုထဲထဲဝင်ဝင် ကျင်လည်လိုက်ရတဲ့အခါ သေမင်းတမန်ကြီးဘယ်လို တွေခွကျကျလုပ်မလဲဆိုတာတွေကိုဟာသနှောပြီး ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီနောက် သေမင်းတမန်ကြီးရော လူ့လောကကနေပြန်ထွက်သွားနိုင်ပါ့မလား။ဘယ်လိုနောက်ဆံတင်းစရာတွေ ဘယ်လိုသံယောဇဉ်ကြိုးလေးတွေကျန်ခဲ့မှာလဲ။အဘိုးကြီးလည်း ဘယ်လိုတွေ တိုင်ပတ်မလဲ…. မသေချင်လို့ခေါ်ထားကာမှဘယ်လိုသေချင်စိတ်ပေါက်အောင် ကိုယ့်ရှုးကိုယ်ပတ်မလဲဆိုတာတော့ ဆက်လက် ကြည့်ရှု့ လိုက်ပါအုံးဗျာ
Tai Chi Zero & Tai Chi Hero 1 (2012)